Stellarium: Chirongwa chekuona nyeredzi kubva pakombuta yako. | Linux Vakapindwa muropa
Stellarium iri yemahara yemahara software chirongwa chakanyorwa muC uye C ++, software iyi inotibvumidza kutevedzera iyo planetarium pakombuta yedu, Stellarium inowanikwa yeLinux, Mac OS X, uye Windows.
Mukati mehunhu hweStellarium, izvi anotibvumira uve nemaonero chaiwo edenga mu3D, kuverenga nzvimbo yeZuva, Mwedzi, mapuraneti, mapoka enyeredzi nenyeredzi.
Kunze kweStellarium, ine bhuku renyeredzi dzinopfuura mazana matanhatu ezviuru kuti isu tinogona kuisa mazviri neizvi tinogona kuwedzera katarogu yedu, kune zvakawanda zvinopfuura zviripo kubva kune yayo yepamutemo webhusaiti.
Nayo Stellarium chirongwa chakanakisa chekudzidzisa iyo yaunogona kunakidzwa nayo maawa akati wandei uchitsvaga cosmos, zvese izvi kubva kunyaradzo yekomputa yako.
Kuve nekuita kuri nani yekushandisa, tinogona kuita fungidziro yenzvimbo, muimba ine rima, neizvi tinowana kuwedzera kwechokwadi kwekufungidzira, ichi ndicho chimwe chezano ratakapihwa nevagadziri veStellarium.
2 Maitiro ekuisa Stellarium paLinux?
3 Mashandisiro ekushandisa Stellarium.
Iko kunyorera kuri parizvino yayo vhezheni Stellarium 0.18.0 iyo iyo ine akati wandei maficha uye akati wandei bug kugadzirisas, pakati patinowana:
Patches yakawedzerwa yeTeXLive
Yakawedzera zita renyeredzi Dnoces
Battlesteads Observatory yakawedzerwa kunzvimbo yenzvimbo
Wakawedzera maturusi kusarudza mavara ezera uye mapuraneti
Wakawedzera sarudzo yekutsikirira halo pateni yakatenderedza nyeredzi dzakajeka.
Yakawedzera Tesla Roadster Orbital Elements
Maitiro ekuisa Stellarium paLinux?
Kuva chikumbiro chemamiriro ekudzidzisa, akawanda ekuparadzira anowanzo sanganisira iwo mukati memidziyo yavo chikonzero nei ichizivikanwa zvikuru kune iyo chikamu chevashandisi veLinux.
Kuisa Stellarium isu tinofanirwa kuvhura terminal uye tigoita inotevera mirairo maererano nekugovera kwako:
ZveUbuntu uye zvigadzirwa kubva pane zvingasarudzwa zviviri:
1.- Isa Stellarium kubva kumahofisi epamutemo, kune izvi isu tinongonyora, izvi zvinoshandawo kunaDebian:
2.- Nekuda kwekuti mashandisiro emahofisi epamutemo haagadzirise kazhinji, pane repository iyo yatichagara tichikwanisa kuwana yazvino vhezheni yeiyi isu tinongonyora.
YeFedora, Red Hat, yakavhurika Suse, Centos uye zvigadzirwa, ingo nyora zvinotevera mune chinouraya:
Chekupedzisira, yeArch Linux uye zvigadzirwa:
Mashandisiro ekushandisa Stellarium.
Iko kushandisa kuri nyore kushandisa, iyo yakakurudzirwa sarudzo ndeye kushandisa keyboardkana. Kutanga kushandisa chishandiso tinofanirwa kuenda kune yedu yekushandisa menyu uye kumhanya iko kunyorera.
Paunotanga Stellarium, isu tinofanirwa kutanga nediki diki yekumisikidza maitiro of application.
Chinhu chekutanga kugadzirisa chinzvimbo cheStellarium, izvo zvatinoita nekudzvanya F6 mairi, tiri kuenda kunoisa makonisheni uko chishandiso chichaiswa, tinogona kushandisa Google Mepu kuziva latitude uye longitude yenzvimbo yatinosarudza.
Nhanho inotevera ndeyekuseta iyo nguva, nekuda kweizvi tinodzvanya iyo F5 kiyi pano isu tichaisa inodikanwa zuva uye nguva.
Kana izvi zvaitwa, tinogona kutanga nekufananidza kwenzvimbo iyo yavakasarudza, pakufambisa mukati mekushandisa tinokwanisa kushandisa mbeva kana makiyi ekufamba-famba.
Shandisa bhatani rekuruboshwe mbeva kusarudza chinhu, bhatani rekurudyi kuti usarudze, uye bhatani repakati kana bhawa repakati kuisa chinhu chakasarudzwa.
Kuti uswededze pamwe nePeji pasi uye Peji kumusoro makiyi.
Tinogona kushandisa sarudzo dzechirongwa kuviga kana kumisikidza mhepo, mhanyisa kufamba kunovanza uye kuratidza mazita, nezvimwe. Kuti tiite izvi isu tinongofanirwa kufambisa iyo cursor yegonzo pamusoro payoPazasi uye kuruboshwe rwechirongwa, idzi sarudzo dzinobuda.
Izvo zvinofanirwawo kucherechedzwa kuti iko kunyorera kunogona kuwanikwa muchitoro cheGoogle Play, kana iwe uchifarira kuiisa iyo chinongedzo ndeichi.
Pasina zvimwe, iwe unongofanirwa kunakidzwa nekuziva cosmos kubva pakombuta yako, kana iwe uchiziva chero zvakafanana application, usazeze kuigovana mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Stellarium: Chirongwa chekuona nyeredzi kubva pakombuta yako.